Somaliland oo Wefti Wasiiro iyo Xildhibaano Ka Socday Maamulka Puntland U Diiday Ka Qayb Galka Caleema Saarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale |
Somaliland oo Wefti Wasiiro iyo Xildhibaano Ka Socday Maamulka Puntland U Diiday Ka Qayb Galka Caleema Saarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale
Sool(GNN):-Wararka naga soo gaadhaya deegaanka Dharkayn-geenyo ee gobolka Sool ayaa sheegaya in deegaankaasi ay iskaga baxeen xubno wasiiro iyo xildhibaano ah oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland, kadib markii Somaliland ay diiday inay ka qayb galaan caleema saarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale.
Wasiirada iyo xildhibaanada Puntland oo ay kamid yihiin gudoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Puntland iyo wasiirada Caafimaadka iyo Arrimaha gudaha Puntland ayaa khilaaf xoogani soo kala dhex galay xubno kale oo ka tirsan Somaliland, kadib markii wasiirka Warfaafinta Somaliland Saleebaan Cali Koorre oo u diiday ka qayb galka munaasibada caleema saarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo maanta lagu caleema saarayo deegaanka Dharkayn-geenyo.
Wararka kala duwan oo ay helayso Warbaahinta Hargeisapress.com, ayaa sheegaya in waftiga ka socday Puntland ee ka qayb gali lahaa munaasibadaasi ay iskaga baxeen isla markaasna arintaasi loo aanayno amaro kala duwan oo la dul dhigay, kuwaas oo ay kamid yihiin in ayna magaalada la galin wax hub iyo ciidan ah sidoo kalena sidii qaab shacab oo kale ay uga qayb galaan munaasibada caleema saarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale.
Arintani oo sababtay xiisad cusub ayaa xubnahani waxa ay kala hadleen Garaadka guud ee Beesha Dhulbahante Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo ay kula kulmeen deegaanka Saax Dheer.
Waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in waftigii ka socotay Puntland ay iskaga baxeen Dharkayn-geeyo oo u jihaysteen dhanka magaalada Garowe.
Wixii warara ee ka soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa….